သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းစနစ်များ - တကယ်ထိရောက်လား။ အပိုင်း ၁ | သိမှုလေ့ကျင့်ရေး
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်၏အကြံပြုချက်အတိုင်း၊ ငါတို့ပြောနေတာကဒီအကြောင်းအရာအတွက်ငါတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်အပ်နှံပြီးပြီ ထိရောက်သောနည်းစနစ်များနှစ် ဦး စလုံး၏အကြောင်း၊ neuromites နှင့်မထိရောက်သောနည်းစနစ်များမရ။ အထူးသဖြင့်ပုံမမှန်မှုများရှိနေခြင်း၌သင်ယူမှုလွယ်ကူစေရန်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။ dyslexiaeအလုပ်လုပ်ရင်းမှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်း).
အသေးစိတ်ကိုတစ်ခုအားရည်ညွှန်းသည် ပြန်လည်သုံးသပ် Dunlosky နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှငါတို့တစ် ဦး ရေးဆွဲခဲ့တယ် နည်းစနစ် ၁၀ မျိုးစာရင်း အချို့သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနများကို စိစစ်၍ လွန်စွာထိရောက်သော်လည်းအချို့မှာအလွန်အသုံးမ ၀ င်ဘဲသူတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကစတင်ခဲ့သောမိန့်ခွန်းကိုမွမ်းမံလိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည် နည်းစနစ် ၈ ခု; ဤအရာများအချို့ကိုယခင်ဆောင်းပါးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့လိမ့်မည်။ Weinstein နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှကျွန်ုပ်တို့မှီခိုအားထားရမည့်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအရဤနည်းပညာအားလုံးသည်သူတို့မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့အားလုံးထိရောက်တယ်.
cosa consiste ၌တည်၏
၎င်းသည်လေ့လာမှုအဆင့်များကိုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းနှင့်၎င်းထက်ပိုသောအချက်တစ်ခုအား session တစ်ခု (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်တွေ့ဆုံချိန်များ) ထက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်အချိန်တစ်ခုတည်းအတွက်ဤအချိန်များကိုအစည်းအဝေးများအတွင်း၌ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်အတော်ပင်လျင်မြန်စွာသင်ယူပြီးသတင်းအချက်အလက်များသည်မှတ်ဥာဏ်၌ပိုမိုတည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ယခင်အပတ်များသို့မဟုတ်လများတွင်ဖုံးထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရည်စူးထားသောအခါသမယများဖန်တီးရန်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်လေ့လာရမည့်အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်မှုနှင့်အတူရရှိနိုင်သောအချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ဤအရာသည်ခက်ခဲပုံပေါ်သည်။ သို့သော်ဆရာများသည်ယခင်သင်ခန်းစာများမှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတန်းထဲတွင်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလျှင်ဆရာများအတွက်အခက်အခဲများစွာမရှိဘဲပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည့်အကွာအဝေးကိုရရှိနိုင်သည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားများအားအချိန်နှင့်အမျှဖြန့်ဝေထားသောဝေဖန်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့စုစည်းရန် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကအဆင့်မြင့်ကျောင်းသားတွေ (ဥပမာ၊ အထက်တန်းကျောင်း) နဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ အကွာအဝေးသည်ကြိုတင်စီစဉ်မှုလိုအပ်သောကြောင့်ဆရာများကကျောင်းသားများအား၎င်းတို့၏လေ့လာမှုကိုကူညီစီစဉ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆရာများကကျောင်းသားများအားစာသင်ခန်း၌ဘာသာရပ်တစ်ခုနှင့်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီ ခွဲ၍ ရက်များ (ဥပမာတနင်္လာနေ့နှင့်ကြာသပတေးနေ့များတွင်ဘာသာရပ်ပြန်လည်လေ့လာရန်အချိန်ဇယား) ကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ မရ။
ပထမဝေဖန်ချက်သည်သုံးသပ်ချက်များ၏အကွာအဝေးနှင့်လေ့လာမှု၏ရိုးရှင်းမှုတို့အကြားဖြစ်နိုင်သောရှုပ်ထွေးမှုများကိုအလေးထားသည်။ အမှန်အားဖြင့်သုံးသပ်မှုအဆင့်များသည်အချိန်နှင့်အမျှရွှေ့ဆိုင်းနေသည်ကိုနည်းပညာကအဓိကပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအဆင့်များအကွာအဝေးအတွက်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများကိုသိထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဆိုင်းငံ့လေ့လာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကောင်းစွာမသိရှိကြပေ။
ဒုတိယဝေဖန်ချက်မှာကျောင်းသားများသည်ဖြန့်ဝေသောအလေ့အကျင့်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုလေ့လာမှုအဆင့်တစ်ခုတည်း၌စုစည်းထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များထက်ပိုခက်ခဲသည်ဟုထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤခံယူချက်သည်လက်တွေ့အားဖြင့်တဖက်၌သုံးသပ်ချက်များကိုအချိန်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကြောင့်အချက်အလက်များပြန်လည်ရယူခြင်းကိုပိုမိုခက်ခဲစေပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်လေ့လာမှုအလေ့အကျင့်သည် (၎င်းသည်ပိုမြန်သည်)၊ စာမေးပွဲသည်စာမေးပွဲဖြေရန်သာရည်ရွယ်ထားသောအခြေအနေများတွင် သို့သော်ဖြန့်ဝေသောအလေ့အကျင့်၏အသုံးဝင်မှုကိုအချက်အလက်များမှတ်ဥာဏ်ထဲတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာထားရန်အရေးကြီးသည့်နေရာတွင်အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ဖြန့်ဝေသောအလေ့အကျင့်၏သံသယဖြစ်ဖွယ်အသုံးဝင်မှုကို ကျော်လွန်၍ အကြိတ်အနယ်လေ့ကျင့်မှုအဆင့်သည်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ အကြံပြုသည်ဖြစ်စေနားလည်သင့်သည်။
၂) ကျင့်ဝတ်စိတ်ဝင်စားမှု '
ပေးထားသောလေ့လာမှုကဏ္ in တစ်ခုတွင်တူညီသောပြဿနာများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဤနည်းလမ်းတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များ (သို့) ပြဿနာအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒသဘောတရားများကိုသင်ယူခြင်းဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ခံခဲ့ရသည်။
အမှန်အားဖြင့်၊ 'ရောယှက်နေသောအလေ့အကျင့်' ကိုလည်းအခြားသင်ယူမှုအမျိုးအစားများတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးချခဲ့သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်အနုပညာနယ်ပယ်၌ကျောင်းသားများအား၎င်း၏မှန်ကန်သောစာရေးဆရာတစ် ဦး နှင့် တွဲ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်ယူခွင့်ရစေခဲ့သည်။
၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အသုံးချနိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုသည်မတူညီသောအစိုင်အခဲများ (အစိုင်အခဲအမျိုးအစားများစွာဖြင့်ဆက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မည့်အစား) ပြသနာများကိုရောထွေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သုတေသနသည်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အခြားရွေးချယ်စရာများကိုအာရုံစိုက်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်ကွာခြားသောအကြောင်းအရာများကိုမရောနှောမိစေရန်သတိထားရန်လိုအပ်သည် (၎င်းတွင်လေ့လာမှုများချို့တဲ့သည်) ။ ငယ်ရွယ်သောကျောင်းသားများသည်ဤမလိုလားအပ်သော (နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော) အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောသတင်းအချက်အလက်များအားပိုမိုအသုံးဝင်သောအစားထိုးမှုနှင့်ရောနှောရန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းသည်အိမ်စာနှင့်လူငယ်များဆရာများအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ဉာဏ်စမ်းပဟေိ
စာသင်ချိန်အတွင်းယခင်အကြောင်းအရာများသို့အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သွားခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များသင်ယူခြင်းကိုရပ်တန့်စေသလား။ သတင်းအချက်အလက်အဟောင်းနှင့်အသစ်မည်သို့မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။ သတင်းအဟောင်းနှင့်အသစ်အကြားချိန်ခွင်လျှာကိုမည်သို့သတ်မှတ်သနည်း။
၃) ပြန်လည်ရယူခြင်း / အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်
၎င်းသည်အသုံးချရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်အလွယ်ဆုံးနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ၎င်းသည်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမှုနှင့်တရားဝင်စစ်ဆေးမှုများမှတဆင့်လေ့လာပြီးသောအရာများကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ မှတ်ဥာဏ်မှအချက်အလက်များပြန်လည်ရယူခြင်းသည်အလွန်ခိုင်မာသောအချက်အလက်များကိုကူညီပေးသည်။ အချက်အလက်များကိုနှုတ်ဖြင့်မပြောဘဲပြန်ခေါ်သည့်တိုင်ဤအလေ့အကျင့်သည်အလုပ်လုပ်သည်။ ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏မှတ်ဥာဏ်မှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သတိရမည့်အစားယခင်လေ့လာခဲ့သောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဖတ်ခြင်း (မှတ်ဥာဏ်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသည်ရလဒ်များထက်သာလွန်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ )
လျှောက်ထားရာတွင်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းမှာကျောင်းသားများလေ့လာခဲ့သည့်ဘာသာရပ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မှတ်မိသမျှကိုချရေးရန်ဖြစ်သည်။
အခြားရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားများသည်တစ်ခုခုကိုလေ့လာပြီးနောက်ဖြေဆိုရန် (တိုးတက်မှု (သို့) လေ့လာမှုအဆင့်အဆုံး၌) သို့မဟုတ်အချက်အလက်များပြန်လည်သတိရရန်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ကူးမြေပုံများဖန်တီးရန်သူတို့ကိုမေးရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှတ်မိတဲ့သတင်းအချက်အလက်
နည်းစနစ်၏ထိရောက်မှုသည်မှတ်ဥာဏ်မှသတင်းအချက်အလက်များရယူရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာအချို့နှင့်လည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဤလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်အာမခံရန်လွယ်ကူလွန်းသည်မဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျောင်းသားသည်၎င်းကိုဖတ်ပြီးပြီးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုဖုံးအုပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုပြန်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်မှပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုများအလွန်နိမ့်ပါကဤအလေ့အကျင့်သည်အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုမထင်မှတ်ပေ။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်စမ်းသပ်မှုများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောစိုးရိမ်စိတ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ စိုးရိမ်စိတ်သည်ဤနည်းစနစ်၏မှတ်ဥာဏ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည် (မီးပွိုင့်ကိုလုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်ပါ၊ ကျောင်းသားသည်ဖြေနိုင်ဖွယ်ရှိသောမေးခွန်းများကိုကောင်းကောင်းဖြေလျှော့နိုင်သည်) ဟူသောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
၄) လုပ်ဆောင်ခြင်း (ဆောင်ရွက်ရန်မေးခွန်းများ)
ဒီနည်းကသတင်းအချက်အလက်အသစ်တွေကိုနဂိုရှိပြီးသားအသိပညာတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးရာမှာပါ ၀ င်ပါတယ်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများစွာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုအကြောင်း၊ မှတ်ဥာဏ်၌အချက်အလက်များပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်များကိုပြောတတ်သည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၎င်းသည်လေ့လာထားသောအကြောင်းအရာများအကြောင်းမေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၌ပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းမှသိရှိထားသောအချက်အလက်များအားယုတ္တိကျသောဆက်စပ်မှုများကိုရှင်းပြရန် ဦး တည်သည်။
လျှောက်လွှာ၏ပထမဆုံးနည်းလမ်းသည်ကျောင်းသားအား "ဘယ်လို?" ကဲ့သို့မေးခွန်းများမေးခြင်းဖြင့်လေ့လာနေသောအချက်အလက်များ၏ coding ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေရန်ရိုးရှင်းစွာဖိတ်ခေါ်နိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ။ "
ဤနည်းကိုသုံးသောအခါကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အဖြေကိုသူတို့၏ပစ္စည်းများ (သို့) ဆရာနှင့်အတည်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အပြောင်းအလဲလုပ်သောမေးခွန်းမှတဆင့်ထုတ်ပေးသောအကြောင်းအရာညံ့ဖျင်းသောအခါ၎င်းသည်သင်ယူမှုကိုပိုဆိုးစေနိုင်သည်။
ကျောင်းသားများသည်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောမေးခွန်းများကိုအခွင့်ကောင်းယူသလား၊ နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများ (ဥပမာဆရာ) အားမေးခြင်းသည်ပိုကောင်းသလားဆိုသည်ကိုကြည့်ရန်လိုသည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်အဖြေကိုရှာဖွေရာတွင်ဇွဲရှိဖို့လိုသည်၊ သို့မဟုတ်ရရှိသောမှန်ကန်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာအဆင့်သည်ဤနည်းစနစ်မှအကျိုးရနိုင်မည့်အရာဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသံသယတစ်ခုကထိရောက်မှုကိုစိုးရိမ်သည်။ ဤနည်းပညာကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်လေ့လာချိန်တိုးရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လုံလောက်သောအားသာချက်ဖြစ်ပါသလား၊ ဥပမာအားဖြင့် (မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း) အလေ့အကျင့်များကိုမှီခိုရန်ပိုအဆင်ပြေသလား။
ဒီနည်းပညာအကြောင်းနားလည်ဖို့အများကြီးမရှိပါဘူး။ ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနေသောသုံးသပ်ချက်ရေးသားသူများကိုအံ့သြစရာမရှိပါ ဆရာ ၀ န်လေ့ကျင့်ရေးစာအုပ်များတွင်အညွှန်းဆုံးအဖြစ်ဤနည်းလမ်းကိုဖော်ထုတ်ပါ (ဆိုလိုသည်မှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်)
အယူအဆတစ်ခုကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်ကွဲလွဲသောဥပမာတစ်ခုကိုပြခြင်းဖြင့်လက်တွေ့ (မှား!) ဥပမာကိုပိုမိုသိရှိလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူလိုသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥပမာပေးသောဥပမာများကိုဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာများသည်အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်ကောင်းစွာဆက်စပ်နေရမည်။
ယေဘူယျစိတ္တဇနိယာမတစ်ခုကိုအကျဉ်းချုပ်။ ဥပမာတစ်ခုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးမည့်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ကျောင်းသား၏ခေါင်းစဉ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်သည်။ အတွေ့အကြုံပိုရှိသောကျောင်းသားများသည်အဓိကသဘောတရားများသို့ပိုမိုလွယ်ကူစွာရွေ့လျားသွားလိမ့်မည်၊ အတွေ့အကြုံနည်းသောကျောင်းသားများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပို၍ နေချင်ကြသည်။
ဥပမာတစ်ခုရှိသင့်သည် (စိတ္တဇဆန်လွန်းပါကနားလည်ရန်ခက်ခဲလွန်းသည်) ၎င်းသည်ခိုင်မာလွန်းလျှင်၎င်းကိုထုတ်လွှင့်ရန်လုံလောက်စွာအသုံးမ ၀ င်ပါ။ သင်သင်ကြားလိုသောအယူအဆ)
“ ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်တန်ဖိုးရှိသည်” ဟုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်နှစ်ခါကြားဖူးလဲ။ ဒါကဒီနည်းကိုအခြေခံတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ပါ။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင် double-coding သီအိုရီကတူညီတဲ့အချက်အလက်များစွာကိုကိုယ်စားပြုခြင်းကသင်ယူမှုနဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး၊ ပိုကိုယ်စားပြုမှုတွေကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သတင်းအချက်အလက် (အလိုအလျောက်ပုံရိပ်ဖော်စနစ်များမှတဆင့်) လည်းအလားတူအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေတယ်။
ရုပ်ပုံများကိုယေဘူယျအားဖြင့်မှတ်ဥာဏ်ထက် သာ၍ ကောင်းမှတ်မိသောကြောင့်ကျောင်းသားများအားပေးအပ်သောဤပုံများသည်သူတို့သင်ယူလိုသောအကြောင်းအရာများအတွက်အသုံးဝင်ပြီးဆက်စပ်မှုရှိစေရန်သေချာရန်အရေးကြီးသည်။
စာသားနှင့်စာသား တွဲ၍ ပုံများကိုရွေးချယ်သည့်အခါဂရုပြုရမည့်အချက်မှာအလွန်အကျွံအမြင်အာရုံအသေးစိတ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံအာရုံပျံ့လွင့်စေပြီးသင်ယူမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
ဤနည်းစနစ်သည်မှားယွင်းသောလေ့လာသင်ယူမှုပုံစံ (သီအိုရီ) နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်အရေးကြီးသည်။ ကျောင်းသားအား ဦး စားပေးသင်ယူမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးခြင်းသည်မေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ (ဥပမာ၊ အမြင်အာရုံ o နှုတ်ဖြင့်) ဒါပေမယ့်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလမ်းကြောင်းများစွာကိုဖြတ်သွားဖို့ (ဥပမာ၊ အမြင်အာရုံ)eပါးစပ်၊ တစ်ချိန်တည်း)
dual coding အတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်ရန်များစွာကျန်ရှိနေသေးသည်၊ ကိုယ်စားပြုမှုများစွာနှင့်ပုံကြီးမြတ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများအားမည်သို့အသုံးချပုံကိုရှင်းလင်းရန်ပိုမိုသုတေသနလိုအပ်သည်။
ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသောနည်းစနစ်များကို သုံး၍ ၎င်းတို့အချင်းချင်းပေါင်းစပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာ၊ ဖြန့်ဝေသောအလေ့အကျင့်သည်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုများ (မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်း) နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါသင်ယူမှုအတွက်အထူးအစွမ်းထက်နိုင်သည်။ ဖြန့်ဝေသောအလေ့အကျင့်၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဥပမာအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုများအထပ်ထပ်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်သည်။
Interleaved အလေ့အကျင့်တွင်ကျောင်းသားများသည်အဟောင်းနှင့်အသစ်ကိုအစားထိုးလျှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (ဖြန့်ဝေခြင်းအလေ့အကျင့်) ပါ ၀ င်သည်။ ခိုင်မာသောဥပမာများသည်နှုတ်နှင့်အမြင်နှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် double coding ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ ထို့ပြင်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအလေ့အကျင့် (ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်း) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သုံးသောအခါအကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာများထုတ်ခြင်း၊ အခိုင်အမာဥပမာများနှင့်နှစ်ဆတိုးခြင်းတို့သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။
သို့သော်လည်းဤသင်ယူမှုနည်းဗျူဟာများပေါင်းစပ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ထပ်တိုး၊ မြှောက်ခြင်း (သို့) အချို့ကိစ္စများနှင့်မကိုက်ညီဘူးလားဆိုသည်ကိုအတည်မပြုနိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနသည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုစီ (အထူးသဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်နှစ်ဆခွဲရန်အရေးကြီးသည်)၊ ကျောင်းတွင်အသုံးချမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ မဟာဗျူဟာတစ်ခုစီ၏နယ်နိမိတ်အခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြီးဤတွင်ဆွေးနွေးထားသောမဟာဗျူဟာခြောက်ခု၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစူးစမ်းရန်လိုအပ်သည်။ မရ။
Dunlosky, ဂျေ, Rawson, KA, နားမှာ, EJ, Nathan, MJ, & Willingham, DT (2013) ။ ထိရောက်သောသင်ယူနည်းစနစ်များဖြင့်ကျောင်းသားများ၏သင်ယူမှုကိုတိုးတက်စေခြင်း - သိမြင်မှုနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာစိတ်ပညာမှလမ်းညွှန်များကိုကတိပေးခြင်း။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 14(1), 4-58 ။
Weinstein, Y. , Madan, CR, & Sumeracki, MA (2018) သင်ယူမှုပညာကိုသင်ကြားပေးသည်။ သိမှုဆိုင်ရာသုတေသန: အခြေခံသဘောတရားများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, 3(1), 1-17 ။
သင်ယူမှု, သင်ယူမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ, သင်ယူမှုနည်းစနစ်များ
သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းစနစ်များ - တကယ်ထိရောက်လား။ အပိုင်း 22021-08-252021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngသိမှုလေ့ကျင့်ရေးhttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/tecniche-per-migliorare-lapprendimento.-quali-sono-davvero-efficaci.jpg200px200px
အေးပြီးပူသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူဟုသူတို့ခန့်မှန်းကြသနည်း။ဆောင်းပါးများ၊ အလုပ်အမှုဆောင် Functions များ၊ Executive Functions များ၊ အလုပ်လုပ်ပုံမှတ်ဉာဏ်များ